Jun 18, 20192min read Drama
ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲက Mulholland Drive
(ယခုရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖူးသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားထားသောကြောင့် မြောက်မြားစွာသော Spoilers များပါဝင်သည်။)
ကိုယ့်မှာ အိပ်မက်တွေရှိတယ်။ ကိုယ်ရဲ့လက်ရှိ ကျဆုံးနေတဲ့သရုပ်မှန်ဘဝရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရိပ်တွေဖြစ်တဲ့ အိပ်မက်တွေ။ ထိုအိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ ကိုယ်ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကိုယ်ဘာတွေကို အိပ်မက်မက်နေမိမှာလဲ။
2016 ခုနှစ်ရဲ့August လ 26 ရက်နေ့မှာ BBC က ကျွန်တော်တို့21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် 100 ဆိုပြီးစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။ ထိုစာရင်းလေးမှာ နံပါတ် 1 ရသွားတဲ့ဇာတ်ကားလေးက Director David Lynch ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Mulholland Drive ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲ။ ဘာကြောင့် ဒီဇာတ်ကားဟာ 21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလို့သူတို့နာမည်တပ်ခဲ့ကြတာလဲ။
Mulholland Drive ကို ကနဦးက ABC ရဲ့Television series တစ်ခုရဲ့ပွဲဦးထွက် Pilot Episode အဖြစ်နဲ့ရိုက်ကူးဖို့စတင်ခဲ့ကြတယ်။ David Lynch သရုပ်ဖော်နေတဲ့ Rita ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ဒုက္ခရောက်နေခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူမကိုယ်တိုင်ကိုက ဒုက္ခဖြစ်နေတာမျိုး။ ဒုက္ခတွေကို ဆောင်ကျဉ်းလာသူမျိုးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းကို ABC က ထုတ်လုပ်သူတွေက သိချင်စိတ်နဲ့နောက်ဘာဆက်ဖြစ်လဲလို့David Lynch ကို မေးတော့ David က 'You have to buy the pitch for me to tell you.' လို့ပဲဖြေခဲ့တယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကိုတော့ Naomi Watts နဲ့ Laura Harring ကိုအဓိကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်စေခဲ့ပြီး Justin Theroux ကိုလည်း အဓိကအမျိုးသားဇာတ်ကောင်နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်စေတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက Laura Harring ဟာ ပထမအဆင့်လူရွေးခံဖို့လာတဲ့လမ်းမှာ car accident အသေးလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့စစချင်းဇာတ်ဝင်ခန်းမှာလည်း သူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ car accident ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့စတင်ခဲ့တာ။
တစ်ကယ်တန်းရိုက်ဖြစ်တော့ သိတဲ့အတိုင်း David Lynch ရဲ့ရိုက်ကူးရေးအသွင်နဲ့ဟန်ကို ABC က သဘောမကျခဲ့ဘူး။ ခွေးချေးတွေကို အနီးကပ်ရိုက်ပြတာတို့။ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အသက်ပိုင်းတွေကို သဘောမကျတာ စသည်ဖြင့် ABC က သဘောမကျတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့David Lynch က interview တစ်ခုမှာ ပြောခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ့တုန်းက tape တွေခေတ်ဆိုတော့ copies ပေါင်း 300 ကျော်လောက်ကူးပြီး ယနေ့အထိ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိကောင်းရှိနေအုံးမယ်။ ထို အမြန် cut လိုက်ရတဲ့ version ကို David Lynch က မကြိုက်ဘူး။ ဒီတော့ သူ့ဘာသာ ဇာတ်ညွှန်းကို ရှည်အောင် ပြန်ရေးတယ်။ နောက်ဆုံး သူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာက ဒီ Mulholland Drive ဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင်ကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲ ရိုက်ကူးတော့မယ်ဆိုတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့ တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးကြတယ်။ အပို US$7Million ကို StudioCanal က ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ယခု Mulholland Drive ဇာတ်ကားကြီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
Mulholland Drive ကို ဇာတ်ကြောင်းပြောရရင် အလွန်ခက်ခဲတယ်။ ဘယ်က စပြောပြီး ဘယ်မှာ အဆုံးသတ်ရမယ်မှန်းတောင် စဉ်းစားဖို့ခက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ အသက်အန္တရာယ်က လွတ်မြောက်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလားပဲ။ သူမကို သတ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့ လူတစ်စုကနေ Car Accident ဖြစ်ပြီး အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သွားတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ သူမရောက်နေတဲ့ ခြံထဲက အိမ်တစ်အိမ်က အိမ်ရှင်တွေဟာ ခရီးဝေးတစ်ခုကို ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာနဲ့သူမလည်း ထိုအိမ်ကြီးထဲမှာ ပြေးပုန်းနေလိုက်တယ်။ သိပ်တော့ မကြာလိုက်ဘူး။ ထိုအိမ်ကြီးထဲကို ထိုအိမ်ရှင်တွေရဲ့တူမလေးဖြစ်တဲ့ Betty ရောက်လာရော။ Betty က သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်သူတစ်ယောက်။ အခုလည်း Los Angles မြို့မှာ သရုပ်ဆောင် Interview တစ်ခုအတွက် လာရောက်ဖြေဆိုဖို့သူမရဲ့အဒေါ်အိမ်မှာ လာတည်းတာ။ ဒီမှာတင် Betty နဲ့ခုနက ထူးဆန်းတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ကြတော့ ထိုအမျိုးသမီးက သူမနာမည်ကို Rita လို့ပြောတယ်။ (အမှန်က သူမနာမည်ကိုတောင် သူမ မမှတ်မိ။ ရေချိုးခန်းထဲက မင်းသမီး Glida ရုပ်ရှင်ကားထဲက Rita Hayworth ပုံကိုတွေ့ပြီး Rita လို့ကောက်ဖြေလိုက်တာ။) Betty ဟာ သဘောကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပီပီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ Rita ကို ကူညီဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတော့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သဲလွန်စကိုရှာဖို့ Rita ပါလာတဲ့ အိတ်ကလေးကို သတို့နှစ်ယောက် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မြောက်မြားစွာသော ပိုက်ဆံတွေနဲ့အပြာရောင်သော့လေးတစ်ချောင်းကို တွေ့လိုက်ကြတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုက Director Adam ဆိုတဲ့လူက သူ့ဇာတ်ကားက ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကို ရွေးချယ်နေတဲ့အကြောင်းပဲ။ ထိုရိုက်ကူးရေးကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတာက Mobsters တွေဖြစ်တာကြောင့် ထို Mobsters တွေရွေးခိုင်းတဲ့ မင်းသမီးကို သူက ငြင်းဆန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်က ဖောက်ပြန်နေတဲ့ မိန်းမနဲ့အဆင်မပြေကာ အိမ်ပေါ်ကနှင်ချခံရပြီး သူ့ရဲ့Bank accounts တွေကပါ ပိတ်ပင်ခြင်းခံလာရတော့ နောက်ဆုံးမှာ The Sylvia North Story ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားအတွက် ထို Mobsters တွေ အတင်းရွေးခိုင်းတဲ့ Camilla Rhodes ဆိုတဲ့ မင်းသမီးကို Adam တစ်ယောက် ရွေးလိုက်ရတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်က မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို ဖတ်မိပြီး Rita တစ်ယောက် သူမနာမည်အရင်း (Diane Selwyn) ကို မှတ်မိသွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ထို Rita ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့Betty တို့နှစ်ယောက် Rita ရဲ့နေတဲ့အိမ်ကို သွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
ရက်အတော်အတန်ကြာ သေဆုံးနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ် အလောင်းကြီးကို သူမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ကြောက်လန့်စိတ်နဲ့သူမတို့နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ထိုည သူမတို့နှစ်ယောက် အိပ်တော့ Betty က သူမရဲ့ခုတင်မှာ Rita လာအိပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး Rita လာရောက်အိပ်စက်ရာမှ သူမတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နမ်းကြ၍ Lesbian ဆန်သော Relationship တစ်ခုကို ထိုညမှာ ပြုခဲ့ကြတယ်။ ထို့နောက် Rita ဟာ ရုတ်တရက်လန့်နိုးပြီး Betty ကိုလည်း နိးကာ ညတွင်းချင်း တစ်နေရာကို ချက်ချင်းသွားရမယ်ဆိုပြီး ထိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သည် Club Silencio လို့အမည်ရတဲ့ ရှေးဟောင်းဆန်သော Theatre hall ကြီးထဲကို ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ သီချင်းဆိုတာကို ထိတ်လန့် ဖွယ်ကြည့်ရှုနေကြရင်း Betty ရဲ့အိတ်ထဲမှာ အပြာရောင်သေတ္တာငယ်လေးတစ်လုံးကို တွေ့လိုက်ကြတယ်။ ထို့နောက် သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရောက်ကာ Rita ရဲ့အပြာရောင်သော့ချောင်းနဲ့Betty ရဲ့အပြာရောင်သေတ္တာငယ်ကို ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ Betty တစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးနေကာ Rita သော့ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ Rita လည်း မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ (ဒုတိယပိုင်း ဇာတ်လမ်းကို အနောက်မှာ ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြထားပါတယ်။)
ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော်ပြောပုံနဲ့ဆို မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆို ရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေအတွက်တောင် ရှုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ သာမာန်အပေါ်ယံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ထိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ အဆပ်အစပ်မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထိုမျဉ်းပြိုင်ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုဟာ လှလှပပကြီးကို ဆက်နွယ်နေတာပဲ။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ရေးချင်လို့လည်း ကျွန်တော် ဒီ review ကို ရေးလိုက်တာပဲ။
အိပ်မက်တွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အဓိကအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင် နှစ်ယောက်ကနေ စပြောရမှာပဲ။ စောစောကပြောထားတဲ့အတိုင်း Betty နဲ့Rita ရှိမယ်။ Betty ဆိုတာ မျက်နှာကချိုသာလွန်းတယ်။ သူမမျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းတွေပဲ ဝေဆာတယ်။ သူတစ်ပါးကို ကူညီဖို့လည်း အသင့်။ ဝါသနာပါတဲ့ သရုပ်ဆောင်ပါရမီကလည်း အရမ်းကောင်း။ အနာဂတ်မှာ ထွန်းတောက်လာမဲ့ အနုပညာကြယ်ပွင့်လေးတစ်ပွင့်။ သူမရဲ့ဘဝမှာ အညွှန့်တွေ အတက်တွေ တလူလူနဲ့ပေါ့။ Rita ဆိုတာကတော့ ထူးဆန်းတယ်။ ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာက သူမဇာတ်ကောင်ကို သရုပ်ဖော်သွားတဲ့နေရာမှာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့အများကြီး။ သူမဟာ ဘယ်ကလာတာလည်း။ သူမနာမည်အရင်းကို သိသွားတာတောင် ထိုနာမည်က သူမနာမည်အရင်းရော ဟုတ်ပါရဲ့လား။ သူမနောက်ကို လူတစ်ချို့ကဘာကြောင့် လိုက်နေရတာလဲ။ သူမမှာပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက ဘယ်ကရတာလဲ။ နောက်ဆုံးသူမအိတ်ထဲက အပြာရောင်သော့ချောင်းလေးဟာ ဘာကိုဖွင့်ဖို့လဲ။ အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့သူမဇာတ်ကောင်ကို ဖွဲ့စည်းထားတာ။ သူမတို့ဇာတ်လမ်းနဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းအချို့လည်း ရှိသေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ Betty တစ်ယောက် သူမရဲ့အိတ်ထဲမှာ အပြာရောင်ဘူးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ပြီး Rita ရဲ့အပြာရောင်သော့တံလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတာကို ပရိသတ်တွေ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အရင်ဇာတ်လမ်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လျှောက်လှမ်းနေသော Betty သည် Diane Selwyn ဆိုသော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အလှမ်းဝေးကာကျဆုံးနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ (Diane Selwyn ဆိုတာက ပထမဇာတ်လမ်းမှာ Rita ရဲ့နာမည်အရင်း) ပထမဇာတ်လမ်းက Rita ဆိုသူ ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ Camilla Rhodes ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် အနုပညာလုပ်ငန်းမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်။ (Camilla Rhodes ဆိုတာက ပထမဇာတ်လမ်းမှာ Director Adam ရွေးလိုက်ရတဲ့ မင်းသမီးဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်)
ဒီတော့ အဆိုပါ ဇာတ်လမ်းနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာက အစစ်လဲ။ ဒါက ပထမမေးခွန်း။ မည်သည့်ဇာတ်လမ်းက အစစ်ဆိုတာကိုတော့ Director David Lynch က အတိအကျကြီး မပြောပေမဲ့ ပရိသတ်တိုင်းနီးပါး ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေက နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမဖြစ်နိုင်ချေက ပထမဇာတ်လမ်းသည် Betty ရဲ့အိပ်မက်ပဲ။ ဒုတိယဇာတ်လမ်းသည် သူမရဲ့လက်တွေ့ပြင်ပကမ္ဘာက ဖြစ်ရပ်မှန်။ ဒါက ကျွန်တော့်ယူဆချက်။ ဒုတိယဖြစ်နိုင်ချေက ထိုဇာတ်လမ်းနှစ်ခုသည် Parallel Universe နှစ်ခုမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခု။ ထို Parallel Universe နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တာက ထိုအပြာရောင်သော့ချောင်းလေး။ ဒီ Theory ကို လက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက Betty ဇာတ်ကောင်နဲ့Adam ဇာတ်ကောင်တို့ပထမဇာတ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရင်ကမသိကြပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လှမ်းကြည့်လိုက်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြည့်တွေဟာ အရင်က တစ်နေရာရာမှာ သိခဲ့ဖူးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အချိန်တုန်းက သိခဲ့ကြသလဲဆိုတာ မှတ်မိကြဟန်မတူ။ ဒါဟာ Parallel Universe ရဲ့အခြေခံ Theory ပဲ။ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းက ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ။ သူတို့နှစ်ယောက် အချိန်ကာလတစ်ခုရဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ မျက်ဝန်းချင်းဆုံခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြာတော့ မကြာလိုက်ဘူး။
နောက်တစ်ချက် အိပ်မက် (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးဆိုတာကတော့ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ပိုနီးစပ်တယ်။ ဒီတော့ ထိုအိပ်မက် (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးဆိုတာကို မပြောခင် ဇာတ်လမ်းအစစ်ကို ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်။
ဇာတ်လမ်းအစစ်ရဲ့အဓိကက Diane Selwyn ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးပဲ။ သူမဟာ Canada ရဲ့Ontario ကနေ jitterbug ဆိုတဲ့အကပြိုင်ပွဲကို နိုင်ပြီး US ရဲ့California ကို သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ရန် ရောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်။ အဒေါ်ဖြစ်သူက ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကြောင့် မသေဆုံးခင် အမွေသဘောမျိုးအဖြစ် သူမကို ငွေကြေးအမြောက်အမြားချန်ရစ်ထားပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူမဟာ Hollywood မှာ နာမည်တစ်လုံးရဖို့ကြိုးစားနေရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Hollywood မြေကို သူမခြေလှမ်းစလှမ်းပြီဆိုတာနဲ့သူမသိလိုက်ရတာက အရာရာဟာ သူမထင်သလို မလွယ်ကူနိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။ “The Sylvia North Story” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့သူမ Audition သွားခဲ့ပေမဲ့ သူမလောက်တောင် အနုပညာစွမ်းရည်မပြည့်ဝတဲ့ Camilla Rhodes ဆိုတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်က ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကို ရရှိသွားခဲ့တယ်။ ဒီမှာတင် သူမဟာ Camilla ကို စတွေ့ခဲ့ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးလမ်းခရီးဟာ ဒီမှာတင် စခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်လာတဲ့ Camilla ဟာ Director Adam နဲ့ကြိုက်သွားပြီး Diane ကို ထားသွားခဲ့တော့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြတ်သွားခြင်းဟာ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အထိနာပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ Camilla ကတော့ သူမတို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်အသွယ်မပြတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိအောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထားသွားခံရတဲ့ Diane အတွက်တော့ နာကျင်စရာတွေနဲ့အပြည့်ပေါ့။
တစ်ညတော့ Camilla ရဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့် Diane တစ်ယောက် Casting Party ပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ သူမမမျှော်လင့်ထားတဲ့ သတင်းစကားတစ်ခုကို ကြားခဲ့ရပြီး လူလည်ခေါင်မှာ အရှက်ခွဲခြင်းခံခဲရတယ်။ ထိုသတင်းကတော့ Camilla နဲ့Director Adam တို့စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဆိုးကြီးပဲ။ ထို့နောက်မှာတော့ နာကျင်မှုတွေနဲ့Diane တစ်ယောက်ဟာ မိမိချစ်တဲ့သူကို သတ်ပစ်ဖို့အထိ ကြံရွယ်လာတော့တယ်။ ဒါကြောင့် လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို Winkie’s ဆိုတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတွေ့ပြီး $50,000 ပေးကာ Camilla ကိုသတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ လူသတ်သမားဖြစ်တဲ့ Joe က လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီဆိုရင် Diane တစ်ယောက် အပြာရောင်သော့ချောင်းလေးတစ်ချောင်းကို သူမရဲ့အိမ်တွင် တွေ့ရမည်ဟု ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့သူမအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီး အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ရဲ့တံခါးခေါက်မှုကြောင့် အိပ်ယာက နိုးလာခဲ့တယ်။ ထိုအိမ်နီးချင်းက သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ယူသွားတဲ့အချိန်မှာ Diane ဟာ အပြာရောင်သော့တံလေးတစ်ချောင်းကို ကော်ဖီခုံပေါ်မှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူမသိလိုက်တာက Camilla တစ်ယောက် လူသတ်သမားရဲ့လက်ချက်ကြောင့် သေဆုံးသွားပြီဆိုတာပဲ။ သူမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေကို နောင်တရတာလား၊ ဝဋ်ကြွေးတွေကပဲ မပြေတော့တာလားတော့မသိ၊ သူမဟာ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ကာ အိပ်ခန်းထဲကို ပြေးဝင်သွားပြီး သူမကိုယ်သူမ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ကာ အဆုံးစီရင်လိုက်တော့တယ်။ သူမ မသေခင် သူမရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ် အတွေးစတွေဟာ သူမကို နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ခြောက်လှန့်နေတော့တယ်။ အပြင်မှာတော့ ရဲတွေလားမသိ၊ တံခါးခေါက်သံတွေဟာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆူညံစွာ ကြားနေရတော့တယ်။
လူ 100 မှာ 90 လောက်ဟာ မိမိရဲ့လက်ရှိဘဝအခြေအနေကို အားရကျေနပ်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကလည်း လူသားတိုင်းရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်ပဲ။ လူအများစုသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်က အောင်မြင်နေသည့်မိတ်ဆွေ (သို့မဟုတ်) Celebrities များကို ကြည့်ကာ မိမိဘဝကို လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ထင်လာကြတယ်။ အထီးကျန်လွန်းတယ်လို့ခံစားလာကြတယ်။ သူများဘဝတွေဟာ သာယာလွန်းတယ်လို့မြင်ပြီးအထင်တွေကြီးလာကြတယ်။ ဒီမှာတင် မနာလိုတဲ့စိတ်ကလေးက ကပ်ပါလာပြီ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိတတ်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်ဆိုရင် ထိုခံစားချက်တွေသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာပေသည်။ ဒီတော့ မိမိလက်ရှိဘဝရဲ့ လွတ်မြောက်ရာနေရာကို ရှာဖွေကြတယ်။ ထိုလွတ်မြောက်ရာနေရာသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဧ။် စိတ်ကူးအိပ်မက်နေရာတွေပင်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုကတည်းကိုက ထိုဝေါဟာရဟာ မိမိလက်ရှိဘဝကနေ တစ်ခြားတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်တာ။ စိတ်ကူးတွေထဲတွင် ကျွန်တော်တို့သည် ပြင်ပလောကမှာ မရတဲ့အရာတွေအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နေသူတွေ။ စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြည့်နေပြီး မိမိရဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့အောင်မြင်နေသူတွေပေါ့။
ဒီလိုပဲ။ ယခု Mulholland Drive ဇာတ်ကားတွင် Diane Selwyn ဆိုသူအမျိုးသမီးသည် သူမရဲ့အချစ်တော်လည်းဖြစ်၊ အခင်မင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ Camilla Rhodes ကို ကြိတ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာ အားကျနေကာ မနာလိုဖြစ်နေသူတစ်ယောက်ပဲ။ Camilla Rhodes သည် ရုပ်ရှင်လောကတွင် အောင်မြင်နေသူ။ ထို့အပြင် Director Adam နဲ့လည်း ဖောက်ပြန်နေကာ Diane Selwyn ကို သစ္စာဖောက်နေတဲ့သူ။ Diane Selwyn ကတော့ ရုပ်ရှင်လောကမှာလည်း အချစ်တော်မိတ်ဆွေ Camilla က တစ်ကားတစ်လေ ဝင်ပါဆိုပြီး ပြောပေးမှ ဝင်ရိုက်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်။ ထို့အပြင် သူ့အချစ်တော် Camilla ကလည်း သူမနောက်ကွယ်မှာ သစ္စာဖောက်နေပြီ။ သူမဘဝမှာ အရာရာဟာ အဆုံးအရှုံးတွေနဲ့ပဲ။ ဒီတော့ သူမဟာ Camilla ရဲ့ဘဝကိုအားကျလာကာ သူမစိတ်ကူးတွေထဲမှာ သူမဟာ Camilla နဲ့ဆင်တူပြီး အလွန်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ Betty ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တာပဲ။ သူမအားကျပြီး ကြိတ်မုန်းတီးနေတဲ့ Camilla ကိုတော့ ဒုက္ခတွေနဲ့ပင်လယ်ဝေနေတဲ့ Rita ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်လိုက်တယ်။ လူသားတွေဟာ မိမိမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသူအကြောင်းကို စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အခါ ထိုသူတွေရဲ့အကြောင်းကို အလုံးစုံမသိတဲ့အတွက် ထိုသူတွေဟာ မသိခြင်း Mystery တွေနဲ့ပဲ စိတ်ကူးယဉ်လေ့ရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါကို Director David Lynch က ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချသွားတာ။ ဒါကြောင့် Diane ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေထဲက Rita သည် မသိခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ။ အရာအားလုံးဟာ ထို Diane/ Betty ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကူးတွေထဲမှာပဲ တင်ပြခဲ့တာ။ နောက်ဆုံး စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေထဲမှာ အပြာရောင်သော့တံလေးကို ဖွင့်မှ ထိုအိပ်မက်တွေထဲကနေ နိူးထလာပြီး ပြင်ပလောကကိုပြန်လည် ရောက်ရှိလာတာပဲ။
ဒီနေရာမှာ ထပ်မံပြီး စဉ်းစားရမှာက Diane/ Betty ရဲ့အိပ်မက်က ဘယ်နေရာက စတင်တာလဲဆိုတာပဲ။ Ontario ကနေ သူမလိုက်ပါလာတဲ့ လေယာဉ် Los Angles မှာဆိုက်တဲ့အချိန်က စတင်တာလား။ Camilla / Rita တစ်ယောက် car accident က စတင်တာလား ဆိုတာပဲ။ အိပ်မက်တွေဟာ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်မက်အတွင်းမှာ အရာအားလုံးဟာ အစစ်တွေအလား ထင်ကြတတ်ပါတယ်။ ယခုဇာတ်ကား Mulholland Drive ဇာတ်ကားတင်ပြပုံဟာ ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့Effect ဖြစ်စေတယ်။ ကြည့်ရှုသူတွေဟာ ဒီဇာတ်ကားတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မိမိဘာသာ မိမိလိုရာဆွဲတွေးကြပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းတွေ ထွင်လိုက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဒီဇာတ်ကားအပေါ် နားလည်ပုံချင်း ခံယူပုံချင်း မတူညီကြဘူး။ ဒါဟာ David Lynch ပရိသတ်အပေါ် လှည့်စားသွားတဲ့ ရုပ်ရှင်နှင့်ဆိုင်သော လှည့်ကွက်ဆန်းတစ်ခုပဲ။
လူအချို့ဟာ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး နက်နဲတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ထိုအရာတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပြီး David Lynch တစ်ယောက် သူ့စိတ်ကူးထဲက သူဖန်တီးချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်တဲ့ အနုပညာတစ်ခုပဲ။ မည့်သည့် လျှို့ဝှက်အဓိပ္ပာယ်မှ မရှိဘူးလို့ယူဆလိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာ စောစောက ပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုပဲ လူတိုင်းမှာ ကွဲပြားတဲ့ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်သွားစေခဲ့တာပဲ။
Roger Ebert က ယခုဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ Mulholland Drive ဟာ Memento လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ Memento လို နားလည်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး အခေါက်ရေပေါင်းများစွာ ကြည့်စရာမလိုဘူးတဲ့။ Mulholland Drive မှာ ဖြေရှင်းချက်မရှိဘူး။ နောက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာတောင် မပါခဲ့ဘူးတဲ့။ ဒါဟာ Roger Ebert တစ်ယောက် ဖြေခဲ့တဲ့ အဖြေ။
Jonathan Ross ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာ/ Presenter တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော်သုံးသပ်သလို သုံးသပ်ပြသွားတယ်။ ဒါဟာ ဆေးသုံးပြီးထိုသူရဲ့စိတ်ကူးထဲက Fantasies တွေလည်းဖြစ်နိုင်သလို လူသားတစ်ယောက် မသေဆုံးခင်မှာ သူအားကျတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို ဝင်ရောက်စိတ်ကူးဝင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ Viewer-created ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်း ကြည့်ရှုသူဖော်ထုတ်စဉ်းစားမိတဲ့အရာကပဲ ထိုကြည့်ရှုသူအတွက် ဇာတ်လမ်းဖြစ်မဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်။ သူသဘောမကျခဲ့တဲ့အချက်တစ်ခုက ဇာတ်လမ်းအချို့ကို ဖွင့်ဟထားခဲ့ပြီး ပြန်လည်မသိမ်းပဲ David Lynch ဒီအတိုင်းထားပစ်ခဲ့တဲ့ parallel stories တွေကိုပဲတဲ့။
Philip French ပြောသွားတာကိုတော့ သဘောကျတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲကအရာအားလုံးဟာ အိပ်မက်တစ်ခုရဲ့အပိုင်းအစတွေပဲဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ဇာတ်ကားနာမည်မှာကတည်းက ပဟေဌိအတွက် အဖြေပေးထားတယ်။ Mulholland Drive ဆိုတာ Hollywood ရဲ့သမိုင်းကိုပြောတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်က အကွေ့အကောက်တွေများပြားသော လမ်းမတစ်ခု။ Betty ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ဟာ တစ်ခြားကမ္ဘာတစ်ခုက လာတာလို့သူက သုံးသပ်တယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့အဆုံးမှာ သူမကိုယ်သူမသတ်သေသွားတဲ့ပြချက်က 1932 တုန်းက Hollywood signs တွေဖြစ်တဲ့ “H” ဆိုတဲ့ signboard ကြီးပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး သတ်သေသွားတဲ့ အသက် 24 နှစ်အရွယ် Peg Entwistle ဆိုတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ကို အမှတ်ရစေခဲ့တယ်တဲ့။ ထိုဖြစ်ရပ်ဟာ Hollywood သမိုင်းမှာ ယနေ့တိုင်အထင်ကရ ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ Lynch ဟာ သူဖော်ပြတော့မဲ့ အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲလို လှည့်စားတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့။
နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jane Douglas ကတော့ လူအများစုသုံးသပ်ကြတဲ့ ပထမဇာတ်လမ်းဟာ အိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒုတိယဇာတ်လမ်းဟာ ပြင်ပကလက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ဟာ လွယ်ကူလွန်းတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး သူသုံးသပ်တာကို ချပြခဲ့တယ်။ ယခုရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ခြင်းဟာ police investigation တစ်ခုလိုပဲ။ သက်သေခံပစ္စည်းတွေလည်း အမြောက်အများရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ထိုအထဲက တစ်ချို့တစ်ဝက်ပဲ အမှုနဲ့သက်ဆိုင်တာမျိုး။ အစကနေ အဆုံးကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ သာမာန်ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ Loop ထဲမှာလိုမျိုးလည်ပတ်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူအကြံပေးခဲ့တာက ဒီဇာတ်ကားမှာ ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ဖော်ထုတ်မနေပဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုပဲ ခံစားပြီး ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။
Mulholland Drive ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာ သာမာန်ပြောရိုးထုံးစံနဲ့အလွန်ကွာခြားပြီး အမြင်အာရုံပိုင်းဖြစ်တဲ့ Visual ပိုင်းကို အလွန်အားထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ တစ်ချို့အဓိပ္ပာယ်တွေကို Visual ပိုင်းနဲ့ပဲ သရုပ်ဖော်ပြသွားတယ်။ Narrative ဆို လုံးဝတောင် မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကို ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့စကားပြော Dialogues တွေကနေ ရှာဖွေလို့မရဘူး။ Visual ပိုင်းကနေပဲ အားထားပြီး အဓိပ္ပာယ်တွေကို ရှာကြည့်ရတယ်။
ကျွန်တော် ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာအများစုဟာ ထိုအဓိကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နှင့် သူမတို့ရဲ့ပဟေဌိတွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်ကားထဲက တစ်ချို့အရာတွေနဲ့တစ်ချို့ဇာတ်လမ်းပြကွက်တွေဟာ ယခုဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုသက်ဆိုင်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြရအောင်။ ဒီနေရာမှာ Diane နဲ့Betty ဟာ တစ်ယောက်တည်းဆိုတာနဲ့ Camilla နဲ့Rita ဟာ တစ်ယောက်တည်းဆိုတာ ထပ်ရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Monster အကြောင်းကို ပြောရအောင်။ ထို Monster ဆိုတာ ကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာ မရေးထားခဲ့ဘူး။ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းမှာ လူတစ်ယောက်က တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့အိပ်မက်အကြောင်းပြောပြနေတယ်။ ထိုအိပ်မက်က ယခုသူတို့ထိုင်နေတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာပဲတဲ့။ ဒီနောက် အိပ်မက်ထဲမှာသူက ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့Monster တစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတော့ နားထောင်သူက ထိုအိပ်မက်မက်သူကို ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့အနောက်ကို ခေါ်သွားတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့အနောက်ကို ရောက်တော့ အိပ်မက်ထဲကထိုရုပ်ဆိုးဆိုး Monster တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာတယ်။ ထို့နောက် အိပ်မက်အကြောင်းပြောသူက မေ့လဲကျသွားတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဒါပဲ။ ထပ်လည်း ထိုဇာတ်ကောင်တွေ မပါဝင်တော့ဘူး။ ဒီဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းက ဘာတွေကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တာလဲ။ အမှန်တော့ Diane တစ်ယောက် Camilla ကို သတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကို ထို Monster ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုသရုပ်ဖော်ထားခြင်းပဲ။ Camilla ကိုသတ်ဖို့လူသတ်သမားကို စေခိုင်းခဲ့တာ ထိုကော်ဖီဆိုင်မှာပဲလေ။
ဒါဆို အပြာရောင်သော့ချောင်းလေးကရော ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ Diane ဟာ Camilla ကို သတ်ဖို့လူသတ်သမားကို ဌားတော့ Camilla သေပြီဆိုရင် မင်း အပြာရောင်သော့လေးတစ်ချောင်းကို တွေ့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ထိုအပြာရောင်သော့လေးဟာ Camilla ရဲ့သေခြင်းတရားကို ကိုယ်စားပြုထားခြင်းပဲ။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံတွေအကြောင်းကို ပြောရအောင်။ ထိုပိုက်ဆံတွေဟာ Camilla ကို သတ်ဖို့Diane တစ်ယောက် လူသတ်သမားကို ပေးလိုက်တဲ့ ငွေတွေပဲ။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ထိုပိုက်ဆံတွေဟာ Rita (Camilla) ဆီမှာပါလာတယ်။ ထိုပိုက်ဆံတွေဟာ Camilla ရဲ့သေခြင်းတရားကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ အရာတွေဖြစ်တာကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ Rita (Camilla) ဟာ ထိုပိုက်ဆံတွေရော ထိုသော့ပြာလေးပါ သူမဆီမှာပါလာခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်ဆိုတဲ့အတိုင်း အိပ်မက်တွေထဲမှာ အရာတစ်ချို့ဟာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူမဘဝရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာ ရှိနေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တိုင်းဟာ သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာ ပါလာကြတယ်။ လူသတ်သမားရဲ့အမဲရောင်စာအုပ်ကလေး၊ သူမရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေ၊ ကော်ဖီဆိုင်က စားပွဲထိုးမလေး၊ Director Adam နဲ့သူ့ရဲ့အမေ၊ ထို Director Adam မသုံးချင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်၊ သူမရဲ့အဒေါ်နဲ့နောက်ဆုံး Cowboy ဆိုတဲ့သူ။ ထိုသူတွေအကုန်လုံးဟာ အိပ်မက်မှာရော၊ ပြင်ပဘဝမှာပါ ပါဝင်နေခဲ့ကြတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စစဖွင့်ခြင်းမှာ ဘာတွေကို ကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိကြသလဲဆိုတော့ 1950s ကျော် ပုံစံမျိုးခေတ်အနေအထားမှာ လူတွေ ကခုန်နေကြတာကိုပဲ။ ထို့နောက်မှာတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးကို မြင်တွေ့ရပြီး အဖိုးအိုတစ်ယောက်နဲ့အဖွားအိုတစ်ယောက်ရဲ့အပြုံးတွေကိုပါ ကိုယ်စီတွေ့ကြရတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ နောက်တစ်ခန်းဟာ အနီရောင်တွေနဲ့ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းကို ပရိသတ်တွေ တွေ့ရတယ်။ ထို့နောက် ခေါင်းအုံးတွေ အိပ်ယာခင်းတွေကို မြင်တွေ့ရတယ်။ ဒီအထိဟာ တစ်ကယ်တော့ အိပ်မက်မဟုတ်ဘူး။ Diane ရဲ့ပြင်ပလောက အစစ်အမှန်ပဲ။ သူမ jitterbug ဆိုတဲ့အကပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရခဲ့ခြင်းတွေကို ခဏတာပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမ အိပ်မောမကျခင် အချိန်ပဲ။ ဇာတ်လမ်းရဲ့Timeline အရဆိုရင် လူသတ်သမားကို ပိုက်ဆံပေးပြီး သတ်ခိုင်းခဲ့ပြီးနောက် သူမအိမ်ပြန်ရောက်လာကာ အိပ်နေတဲ့ ကာလပဲ။ ထိုအချိန်ထိ သူမဟာ Camilla သေပြီဆိုတာ မသိသေးဘူး။ ထို့နောက်မှာတော့ သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲကို ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်သွားတော့တယ်။
နောက်ထပ် ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက အိပ်မက်ထဲမှာ လူသတ်သမား Joe က ဆံပင်ရှည်နဲ့လူတစ်ယောက်ကို သတ်တဲ့အခန်းပဲ။ ကြည့်ရတာ ထိုဆံပင်ရှည်နဲ့လူဟာ Car Accident ဖြစ်တုန်းက ကားမောင်းလာတဲ့ လူငယ်တွေအဖွဲ့ထဲက မသေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း သူ့ဆီမှာ စာအုပ်အမဲလေးရှိနေတာ။ ဒါကို လူသတ်သမား Joe က ထိုစာအုပ်အမဲကို ရဖို့ထိုဆံပင်ရှည်နဲ့သူကို သတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် နောက်ထပ် လူနှစ်ယောက်ကိုပါ သတ်လိုက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါက ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ အပြင်လောကမှာ Diane ဟာ Camilla ကို သတ်ဖို့စေခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ သူမနောင်တရခဲ့တာကြောင့် ထိုလူသတ်သမား Joe ကို လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် သူမ အိပ်မက်ထဲမှာ ပုံဖော်ခဲ့တာ။ အမှန်တော့ Diane ဟာ Camilla ကို မသေစေချင်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့်အိပ်မက်ထဲမှာ သူမ သရုပ်ဖော်ခဲ့တဲ့ လူသတ်သမား Joe ဟာ မကျွမ်းကျင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ပြောပြခဲ့တဲ့ Parallel Universe Theory လေးကို မှတ်မိကြသေးလားမသိဘူး။ ထို Theory လေးကို အကြမ်းဖျင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တုန်းက အိပ်မက်ထဲမှာ Betty နဲ့Director Adam တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြည့်နှစ်စုံကို ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။ ဒါကို ယခု အိပ်မက်အနေနဲ့ပြန်ကောက်ပြီး တစ်ခြား Theory တစ်ခုနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်။ သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာ Director Adam ဟာ မိမိပုံဖော်ချင်တဲ့ အနုပညာကို ပုံဖော်ခွင့်မရတာကို တင်ပြထားတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ မင်းသမီးကို ပါဝင်ခွင့်မရပဲ Mobsters တွေကြီးစိုးနေတဲ့ လောကဖြစ်တာကြောင့် သူတို့အမိန့်အတိုင်း သူတို့ပြောတဲ့မင်းသမီးကိုပဲ ခန့်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ Diane တစ်ယောက် Hollywood မှာ သူမဟာ အရည်အချင်းပြည့်မှီတာတောင် မအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ဟန်နဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ခဲ့တာ။ Diane ဟာ ပြင်ပလောကမှာ Adam ကို မုန်းတီးသောကြောင့် သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲတွင် ထိုသူကို အသုံးမကျသူ၊ အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသောသူ၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းရှိကောင်းရှိပေသော်ငြားလည်း တစ်ပါးသူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေ အမိန့်တွေကို မလွန်ဆန်ရဲတဲ့ ပျော့ညံ့တဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဖော်ထားခြင်းပဲ။ ထားပါ။ အိပ်မက်ထဲမှာ တစ်ခန်းပဲ Betty နဲ့Adam တို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ စကားတောင် မပြောဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ မျက်လုံးအကြည့်တွေပဲ ရှိခဲ့ကြတယ်။ ထိုအကြည့်တွေကို နောက်တစ်နည်း အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စွဲလန်းသွားလောက်တဲ့ အကြည့်မျိုးတွေ၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်ချင်ချစ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်။ Relationship တစ်ခု စတင်ကောင်း စတင်မိကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ Diane ဟာ Camilla ကို အရမ်းချစ်တာကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာတောင် Betty အနေနဲ့သူမဟာ Adam ရဲ့အကြည့်ကနေ ပြေးထွက်လာခဲ့ခြင်းပဲ။ Adam ကို ထားရစ်ခဲ့တယ်။ သူမကိုယ်တိုင်လည်း အိပ်မက်ထဲမှာ Camilla ကို ဂလဲ့စားချေလိုစိတ်နဲ့Adam နဲ့ချစ်ကြိုက်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် သူမဟာ ထိုအခွင့်အရေးကို အသုံးမချခဲ့ဘူး။ သူမဟာ Camilla ကို ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ခိုင်းစေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အသိညီမငယ်တစ်ယောက်တို့သိချင်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက အိပ်မက်ထဲမှာ Mobster ကြီးတစ်ယောက်နဲ့Director Adam တို့မင်းသမီးရွေးဖို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အခန်းမှာ ထို Mobster ကြီးဟာ ဘာကြောင့် Espresso ကော်ဖီကို အလွန်အမင်း Obsessed ဖြစ်လွန်းတာလဲဆိုတာပဲ။ သူသောက်ဖို့ဆိုပြီး တစ်ခြားသူတွေက ကြိုတင်စုံစမ်းထားကာ အကောင်းဆုံးဖျော်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထို Mobster ကြီးက တစ်ငုံပဲ သောက်လိုက်ပြီး မျက်နှာမဲ့ရွဲ့ကာ ပြန်ထွေးထုတ်လိုက်တယ်။ တစ်ခြားသူတွေက အသည်းအသန်ဖြစ်ကုန်တယ်။ တောင်းပန်တဲ့သူတွေက တောင်းပန်ကြသလို အံ့သြတဲ့သူတွေကလည်း အံ့သြကြတယ်။ ဒါက အိပ်မက်ထဲကအခန်း။ ပြင်ပကအခန်းကို ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်။ Camila ဖိတ်လို့Party ပွဲတက်လာတဲ့ Daine ဟာ သူမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကို လူတွေကိုပြောပြနေရင်းနဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ Espresso ကော်ဖီကို တစ်ငုံလောက် သောက်လိုက်တယ်။ ထို့နောက် သူမကို ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ Italian လူကြီးတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့လိုက်တယ်။ ထိုလူကြီးဟာ သူမရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာတော့ သူမထိုအချိန်ကသောက်လိုက်တဲ့ Espresso ကို အလွန်အမင်း Obsessed ဖြစ်လွန်းတဲ့ Mobster ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာ ပြင်ပကမ္ဘာက ပုံရိပ်တွေ၊ လူသားတွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာ စိတ်အစွဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပြန်ပါဝင်လာခြင်းလို့ပဲ ကျွန်တော်မှတ်ယူလိုက်တယ်။ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းနှစ်ခန်းရဲ့ချိတ်ဆက်မှုဟာ Espresso ကော်ဖီတစ်ခွက်ပဲ။
ဒါဆို အိပ်မက်ရဲ့အစောပိုင်းနားလောက်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စုံထောက်နှစ်ယောက်ကရော။ မှတ်မိကြမှာပါ။ Mulholland Drive မှာ car accident ဖြစ်သွားတာကြောင့် လာရောက်စုံစမ်းကြတဲ့ စုံထောက်နှစ်ယောက်။ သူတို့ဟာ သူတို့ဇာတ်ဝင်ခန်းထပ်မပါလာတော့ဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော်ယူဆလိုက်တာက ထိုစုံထောက်နှစ်ယောက်ဟာ ပြင်ပလောကမှာ Camilla အသတ်ခံရမှုနဲ့Diane ကိုလာရှာနေတဲ့ စုံထောက်နှစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ Diane ရဲ့အိမ်နီးချင်းက သူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကို လာယူရင်းနဲ့စုံထောက်နှစ်ယောက်လည်း နင့်ကို လာရှာနေတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုဖြစ်ရပ်ဟာ သူမအိပ်မက်မက်ပြီးမှ ဖြစ်တာကြောင့် သူမအိပ်မက်ထဲမှာ ထိုစုံထောက်နှစ်ယောက်ဟာ ဘာကြောင့် ပါဝင်လာရတာလဲ။ ဒါမှမဟုတ် Diane ဟာ သူမ မအိပ်စက်ခင်ကတည်းက ထိုစုံထောက်နှစ်ယောက်ဟာ သူမနောက်ကို လိုက်နေတယ်ဆိုတာ သိနေခဲ့လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် Camilla ရဲ့သေဆုံးခြင်းကိစ္စမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားကိစ္စတစ်ခုကြောင့်လား။
ကျွန်တော်အသိချင်ဆုံးကတော့ ပြင်ပလောကမှာ ထိုအပြာရောင်သော့ချောင်းလေးဟာ ဘာကိုဖွင့်တာလဲဆိုတာပဲ။ ထိုမေးခွန်းကို Diane က လူသတ်သမားကို မေးခဲ့ပေမဲ့ လူသတ်သမားက ပြန်မဖြေခဲ့ပဲ ရယ်မောနေခဲ့တယ်။ စကားမစပ် ပြောရမယ်ဆိုရင် Diane က လူသတ်သမားဌားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ထို Winkie’s ကော်ဖီဆိုင်မှာ အိပ်မက်တွေမက်တယ်ဆိုပြီး သူ့အိပ်မက်ကို ပြောပြနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။ (ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။) အမှန်တော့ Diane ရဲ့စိတ်ဟာ သူမ မအိပ်စက်ခင် တွေ့လိုက်ရတဲ့ Random လူတွေနဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို သူမအိပ်မက်မှာ ဇာတ်လမ်းအထောက်အပံ့တွေအဖြစ်နဲ့ပြန်အသုံးချခဲ့တာပဲ။ ထိုအပြာရောင်သော့ချောင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သိပေမဲ့ ကျွန်တော်စောစောကမေးထားသလို ထိုသော့က ဘာကို ဖွင့်တာလဲဆိုတော့ အပြာရောင်သတ္တာငယ်လေးကို လမ်းဘေးက လူကြီးတစ်ယောက်ကိုင်ထားတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ပြင်ပလောကဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ Diane ရဲ့ hallucination လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတာက Diane သူမကိုယ်သူမ သေနတ်နဲ့မသတ်သေခင်မှာ အံဆွဲကိုဖွင့်လိုက်တော့ ထိုအပြာရောင်သေတ္တာငယ်လေးကို ကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
David Lynch မှာ ထူးခြားတဲ့ဟန်တစ်ခုရှိတယ်။ တစ်ခြားသူတွေ သတိထားမိလားတော့ မသိဘူး။ ဇာတ်ကားတစ်ကားတိုင်းမှာ ပရိသတ်ကို မျောပါစေသွားမဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုစီ ထားခဲ့တယ်။ ဥပမာ Blue Valvet က Frank Booth (Dennis Hopper) သီချင်းဆိုခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတို့၊ Wild at Heart ဇာတ်ကားထဲက Sailor Ripley (Nicholas Cage) တစ်ယောက် နောက်ဆုံးခန်းမှာ ကားခေါင်မိုးတွေပေါ်ကနေ ပြေးလာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတို့လိုမျိုး အထင်ကရဖြစ်စေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ။ ယခု Mulholland Drive မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ကို ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းက Betty (Naomi Watts) က ဇာတ်ကားတစ်ကားအတွက် Audition ဝင်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းပဲ။ ထိုအခန်းတစ်ခန်းတည်းနဲ့တင် ဒီဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလို့ခေါ်ထိုက်နေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းရဲ့အသက်က မင်းသမီး Naomi Watts ပါ။ သူမဘယ်လိုအစွမ်းမျိုးနဲ့ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းကို သရုပ်ဆောင်သွားလည်းဆိုတာ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးရဲ့ပဟေဌိကိုရှာဖွေရတာထက်တောင် ပိုမိုအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။
ထို့အပြင် အိပ်မက်ကနေ ပြင်ပလောကကို ရုတ်တရက်ကူးပြောင်းသွားပြီးနောက် စစချင်းဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့Diane ကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခန်းဟာ Naomi Watts ကို ရုတ်တရက် မှတ်တောင်မမှတ်လိုက်ပါ။ တစ်ခြားမင်းသမီးတစ်ယောက် ထည့်သုံးခဲ့တာလားလို့တောင် သံသယဝင်ခဲ့မိတယ်။ Character transition ကို သရုပ်ဖော်တဲ့နေရာမှာလည်း Naomi Watts အလွန်ပြောင်မြောက်ခဲ့တာလေ။
Horror ဆန်သော Mulholland Drive
ဒီဇာတ်ကားကို Horror ဆန်တယ်လို့မြင်မိခဲ့တာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလားဆိုတဲ့ သိချင်စိတ်နဲ့internet မှာရှာဖတ်မိတော့ BilgeEbiri ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်လည်း ကျွန်တော်နဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်တဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ယခုဇာတ်ကားကို ရေးသားထားတာဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အမှန်တော့ Mulholland Drive ဆိုတာ ကြောက်စရာအခန်းတစ်ခန်းမှ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ခြောက်ခြားစရာ အိမ်ကြီးတွေလည်း မရှိသလို၊ သွေးသံသရဲရဲနဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်း မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး သရဲတွေ၊ Zombies တွေ၊ Vampires တွေတောင် မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် Horror ဆန်တဲ့ ခံစားချက်ရရှိခဲ့တာလည်း။
ဇာတ်ကြောင်းထက် တင်ပြပုံဟာ Horror ဆန်နေခဲ့တာမျိုးပါ။ ဥပမာ စောစောကပြောတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ အိပ်မက်အကြောင်းပြောနေကြတဲ့ လူနှစ်ယောက်အခန်းဟာ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကတစ်ခုပဲ။ သေချာပြန်ကြည့်ရင် Camera လှုပ်ရှားမှုဟာ တသေမတ်တည်း ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းမသွားပဲ လေလှိုင်းကြား (သို့မဟုတ်) ရေလှိုင်းကြားမှာ မျောပါနေတဲ့ သဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့Camera ကို ရွေ့လျားစေခဲ့တယ်။ ထို့အပြင် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ မျက်နှာကို ပြသတဲ့ Close up shots တွေဟာလည်း Horror ကို ဆန်ခြင်းကို အားသာစေခဲ့ပြန်သေးတယ်။ ထို့အပြင် ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့POV (Point of View) တွေလည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ထို့အပြင် ဇာတ်လမ်းရဲ့မရေရာ မသေချာခြင်းတွေကို ကြည့်နေတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အဖို့တော့ ထိုမသိခြင်းတွေကြောင့် စိတ်ကို ပိုမိုခြောက်ခြားစေတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ David Lynch ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ယခု Mulholland Drive ရုပ်ရှင်ကို Horror လို့မခေါ်ခဲ့ဘူး။ ထိုအစား သူပြောခဲ့တာက “Love Story” အချစ်ပုံပြင်တဲ့။
ဒီတော့ စောစောကပြောတဲ့ Monster ဆိုတဲ့လူကြီးတစ်ယောက် Winke’s ကော်ဖီဆိုင်အနောက်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ သူ့ရဲ့အိပ်မက်အကြောင်းကိုပြောနေတဲ့သူက သူ့အိပ်မက်ထဲက Monster ဟာ man behind the curtain” ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
“I'm scared like I can't tell you. Of all people, you're standing right over there... by that counter. You're in both dreams and you're scared too. I get even more frightened when I see how afraid you are and then I realize what it is. There'saman... in back of this place. He's the one who's doing it. I can see him through the wall. I can see his face. I hope that I never see that face, ever, outside ofadream.”
ဒါကို HarrySaxon site က စာရေးဆရာတစ်ယောက်က ဘယ်လိုသုံးသပ်သွားသလဲဆိုတော့ Mulholland Drive ဇာတ်ကားထဲက David Lynch သရုပ်ဖော်ခဲ့တဲ့ Monster ဟာ David Lynch ကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာ အရာအားလုံးကို နားလည်ဖို့ထက် ခံစားတတ်ဖို့က ပိုမိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ယခု Mulholland Drive က ပြောပြသွားခဲ့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ပရိသတ်တွေဟာ ရုပ်ရှင်အချို့ကို plot holes တွေရှာမယ်ဆိုပြီး နားလည်ဖို့ကို ပိုဦးစားပေးကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတာ ရုပ်ရှင်တွေပါ။ နားလည်ဖို့ဟာ အရေးကြီးပေမဲ့ ခံစားတတ်ဖို့က အဓိကပါ။ တစ်ခါတုန်းက Interstellar ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်သောကြောင့် ကျွန်တော့်အမေကို ရုပ်ရှင်ရုံကိုခေါ်ပြီး ပြခဲ့ဖူးတယ်။ ဇာတ်ကားပြီးလို့ရုံထဲကထွက်လာတော့ မေမေကပြောတယ်။ “သားရယ်.. ဒီကားကို အမေနားမလည်ပေမဲ့ ကြည့်လို့အရမ်းကောင်းတယ်။” တဲ့။ ဒါဟာ အနုပညာပဲ။ အရာအားလုံးကို နားလည်စရာမလိုဘူး။ ခံစားတတ်ဖို့ပဲ လိုအပ်တယ်။ ဒါဟာ ရုပ်ရှင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကျွန်တော်ခံယူတဲ့ အမြင်ပဲ။ ထိုအမြင်ကို သက်သေထူပြနိုင်ခဲ့တာကတော့ ယခု Mulholland Drive ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားပဲ။
နိဂုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Mulholland Drive ရုပ်ရှင်ဟာ David Lynch ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားလို့တောင်ဆိုလို့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါ။ Diane ဇာတ်ကောင်ဟာ အဆုံးသတ်မှာ ရက်စက်ပြီး ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပေမဲ့ သူမရဲ့နောက်ဆုံးအိပ်မက်တစ်ခုဟာ သူမဘဝရဲ့ဖြစ်သင့်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခု၊ သူမဘဝရဲ့ပန်းတိုင်၊ လစ်ဟင်းနေခဲ့တဲ့ သူမဆန္ဒတွေရဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ သူမရဲ့ထိုနောက်ဆုံးစိတ်ကူးအိပ်မက်တွေအားလုံးဟာ သူမထာဝစဉ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်အနုပညာကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ပဲလေ။
P.S. Mulholland Drive သည် Los Angles မြို့ရဲ့မြောက်အရပ်မှာရှိသော တောင်တန်းတွေပေါ်က အကွေ့အကောက်များပြားလွန်းတဲ့ လမ်းမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်တဲ့ လမ်းမအကွေ့တွေကြောင့် ကားမောင်းရတာ အလွန်ခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့လည်း ကြားဖူးတယ်။ ထိုလမ်းမပေါ်မှာ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Marlon Brando တို့Jack Nicholson တို့ရဲ့အိမ်ကြီးတွေလည်း ရှိတယ်။ ထို့အပြင် လူတွေမနေတဲ့ နေရာတွေများပြားတာကြောင့် ဘိန်းအရောင်းအဝယ်တို့Gangsters တွေရဲ့စုဝေးရာ အရပ်လည်း ပြောလို့ရတယ်။ သိမ်းဌက်တို့၊ တောကြောင်တို့၊ ဒရယ်တို့၊ မြွေတို့အလွန်ပေါများတယ်လို့လည်း သိရတယ်။ ထိုလမ်းမကို William Mulholland (1855–1935) ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး နာမည်ပေးခဲ့ကြတာ။